Cooking With Hafza Archives - Daryeel Magazine
Hergabka waxaa sababo fayras calaamadaha lagu gartana waxaa ka mid ah qandho, qufac, cune xanuun, qarqaryo, iyo cabur iyo san-xiran. Hegabka looma qaato antibiotic sababtoo aha waxaa keenaya ma ahan bakteeriya ee waa fayras. Daawooyinka hergabka loo qaato waa kuwo caawiya inay yareeyaan qufaca, ama inay qandhada jabiyaan ama inay joojiyaan hindhisada iyo cuncunka sanka. Hadaba waxaa jira waxyaabo dabiici …
MARAQ MACAAN: Moosbakeni Iyo Caano Qumbe
Kusoo dhawaada Cooking With Hafza, maanta waxay idiin haysaa maraq cajiib ah oo laga samaynayo khudrad kaliya oo aad ku cuni karto muufo, chapati, bariis ama wixii markaas kuu diyaarsan. Waa maraq fudud oo qof kasta uu samayn karo. Habka diyaarinta: Waxaa loo baahan yahay: Moosbakeni Caano qumbe Basal Yaanyo fresh ah Saliid Huruud Filfil shiidan Toon shiidan Cusbo Basbaaska …
Waxaa foodda inagu soo haya oo ay ummadda muslimiintu isu diyaarinayaan maalinta ciiddal carafa, Cooking with Hafza ayaa natusinaysaa macmacaanka ciida oo hab fudud loo samaynayo. Macmacaankaan ay Hafza ciida ugu talo gashay ayaa ah miiska kuu qurxinaya caruurta iyo qoyskana ka farxinaya. Habka diyaarinta: Waxaad u baahan tahay Koob Caano ah oo qandac ah 2 Qaado iyo bar khamiir ah …
QADO FUDUD: Digaag, Caano Garoor Iyo Bariis
Waa barnaamijkii cunto karinta ee Cooking With Hafza oo ku saabsan qado fudud oo qof kasta uu samayn karo. Qadadaan ayaa kooban digaag, bariis, maraq yar iyo xoogaa ansalaata ah. Digaaga waxaa la marinaya xawaashyo kala duwan sida xawaash dhuudhuub shiidan, barbarooni shiidan, sanjabiil shiidan, cusbo iyo caano garoor kadibna waa la dubayaa.. Alaabtaan waxaa lagu cunayaa suugo yar oo …
Nadiifinta Iyo Hagaajinta Jikada
Soonka kadib waa muhiim in jikada la nadiifiyo sababtoo ah cunto badan ayaa la kariyaa xiliga ramadaanka, saliid iyo qiiq badan ayaa wasakheeyaa jikada dadkuna ma hayaan energy fiican oo ay ku hajaajiyaan xiligaas. Hadaba Hafza Hassan ayaa maanta natusinaysa nadiifinta iyo hagaajinta jikada iyo alaabta taalla, sida tallaagada, microwave ka, armaajooyinka, foornada caagga qashinka iwm. Foornada waxaa lagu dhaqi …
Want to know how to make your favorite Somali restaurants steak recipes? Well your in luck, you came to the right place! Keep watching:
Waa markale iyo Cooking With Hafza, muuqaalka maanta waxa uu ku saabsan yahay waxyaabaha Hafza ay samayso si ay cayilka iskaga ilaaliso ramadaanka kadib. Dad badan ayaa quraacda ka taga iyagoo u arkaya inaysan muhiim ahayn ama iyaga oo doonaya inay cayilka iska ridaan balse waxaa la ogaaday in dadka aan quraacan inay ka buuran yihiin kuwa quraacda cuna sababtoo. …
Baradho Iyo Kabaab
Ciid wanaagsan asxaabta meel kasta oo aad dunida ka joogtaan, kusoo dhawaada barnaamijka Cooking With Hafza oo ku saabsan cunto macaan oo laga samaynayo baradho iyo kabaab. Marka hore waxaa la diyaarinayaa baradho la shiilayo oo ansalaato ahaan loo samaynayo. Waxaa lagu shiilaya saliida Canola Oil waxaa lagu darayaa yaanyo, kamsar caleen, cusbo, sumac iyo biyaha liin dhanaanta. Sidoo kale …
Macmacaan Laga Samaynayo Karooto Iyo Baradho
Ramadaan kariim, waa barnaamijkii Cooking With Hafza iyo mid ka mid ah waxyaabihii gaarka ahaa ee ay Hafza ugu talo gashay inay nala wadaagto bishaan barakeynsan. Muuqaalka waxaa u ku saabsan yahay macmacaan caafimaad leh oo laga samaynayo karooto, baradho, malab iyo saliid saytuun. Daawasho wacan:
Maraq Nafaqo Badan Oo Laga Samaynayo Misir (lentil Soup)
Misirtu Waxaa cunto nafaqo badan. Wa ilo wanaagsan oo laga helo macdanta potassium, Kalshiyaam, zinc, niacin iyo vitamin K, misirtu waxay si gaar ah qani ugu tahay Fiber, borotiin, folate iyo birta (iron). Cuntooyinka nafaqada badan sida misirta waxay yareeyaan khatarta dhibaatooyin badan oo caafimaad. Cuntooyinka fiber qaniga ku ah sida misirta waxay caawiyaan ka hortagga faaliga, wadne xanuunka, macaanka, …
COOKING WITH HAFZA: Qado 10 Daqiiqo Lagu Diyaarin Karo
Kusoo dhawaada Cooking With Hafza, qeybtaan ayaa ku saabsan qado si fudud loo diyaarinayo oo qof walba samayn karo.
Jalaato Laga Samaynayo Khudaar Iyo Yogurt Oo U Fiican Hooyooyinka
Waa jalaato aad isku qaboojin karto islamarkaana aan kugu kordhinayn wax cayil ah sababtoo ah laguma darayo sonkor ama waxyaabaha kiimikada ah ee cuntada ka ilaaliya qurmidda.
Cabitaano Caafimaadka U Roon Jirkana Ka Saara Sunta Iyo Qashinka
Waxay Hafza maanta idiin soo bandhigaysaaa Cabitaano jirka ka saara sunta iyo wasakhda, tamar badanna laga helo. Cabitaanadaan macaan ayaa sidoo kale horumariya caafimaadka qofka. Waxay kaloo hoos u dhigaan cayilka. Jirka oo qashinka laga saaro waxay kordhisaa quruxda maqaarka, waxay siyaadisaa tamarta waxay caawisaa habka dheefshiidka iyo luminta miisaanka. Sidoo kale qashin saariddu waxay kor u qaadda shaqada kilyaha, …
Sida Caloosha Loo Yareeyo Iyo Sirta Hafza
Kusoo dhawaada barnaamijka Cooking With Hafza oo maanta ku saabsan sida ay Hafza iskaga yareyso cayilka gaar ahaan dhexda iyo caloosha. Ka faaidaysi Wacan: